‘त्यो पर्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बारे सर्वोच्चको आयो आदेश, गर्यो यस्तो निर्णय ! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Nepali in Australia
May 19, 2021 autherLeaveaComment on ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बारे सर्वोच्चको आयो आदेश, गर्यो यस्तो निर्णय ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
सरकारले वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म संसद अधिवेशन नै डाकिएको छैन। बजेटअघि पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक र प्रक्रियागत कामसमेत अघि बढाइएको छैन।
बजेट ल्याउनुअघि संसदमा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित हुनै पर्छ। तर, समयमै संसद् अधिवेशन नबसेका कारण प्रि–बजेट छलफलको समय गुज्रिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेट ल्याउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम १४२ (४) मा छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै छलफल समाप्त भइसक्नुपर्नेछ।’
जसअनुसार यो छलफल वैशाखभित्र गरिसक्नुपथ्र्यो। संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नैपर्ने किटान गरिएको छ।